FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuvale IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMyanmar IsiNavajo IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Igama likaThixo elibhalwe ngoonobumba bakudala besiHebhere livela kaninzi kwimibhalo yeBhayibhile yakudala
Abantu abaninzi bathetha noThixo besebenzisa amagama athi Nkosi, Sonini-nanini, Allah okanye bavele nje bathi Thixo ngelithi bayamhlonipha. Kodwa uThixo unalo igama. Singalisebenzisa?
OKUTHETHWA NGABANYE ABANTU
Abantu abaninzi abathi bangamaKristu bakholelwa ukuba igama likaThixo nguYesu. Abanye bathi kuba emnye uThixo uSomandla, akunyanzelekanga ukuba sisebenzise igama lakhe. Abanye bathi akufanelekanga ukusebenzisa igama likaThixo.
Igama likaThixo uSomandla ayingoYesu kuba uYesu akangoThixo uSomandla. UYesu wafundisa abalandeli bakhe ukuba bathandaze kuThixo bathi: “Bawo, malingcwaliswe igama lakho.” (Luka 11:2) Naye wathandaza kuThixo wathi: “Bawo, lizukise igama lakho.”​—Yohane 12:28.
EBhayibhileni uThixo uthi: “NdinguYehova. Lilo elo igama lam; andiluniki omnye uzuko lwam.” (Isaya 42:8) “UYehova” ligama likaThixo eliguqulelwe koonobumba abane besiHebhere uYHWH. KwiZibhalo ZesiHebhere, livela kayi-7 000. * Livela kakhulu kunamagama athi “Thixo,” “Somandla,” “Nkosi,” Abraham, Moses, nelithi Davide.
Ayikho indawo eBhayibhileni ethi uYehova akafuni sisebenzise igama lakhe. IZibhalo zibonisa ukuba abakhonzi bakaThixo babelisebenzisa ngokukhululekileyo. Babecinga ngalo xa bethiya abantwana babo, njengoEliya othetha ukuba “UThixo Wam NguYehova,” noZekariya othetha ukuba “UYehova Ukhumbule.” Babelisebenzisa naxa bencokola.​—Rute 2:4.
UThixo ufuna silisebenzise igama lakhe. Sikhuthazwa ukuba ‘sibulele kuYehova, sibize egameni lakhe.’ (INdumiso 105:1) Akabalibali abo “bacinga ngegama lakhe.”​—Malaki 3:16.
“Ukuze abantu bazi ukuba wena, ogama linguYehova, nguwe wedwa Oyena Uphakamileyo phezu komhlaba wonke.”​—INdumiso 83:18.
Abanye abaphengululi bakholelwa ukuba ngesiHebhere igama elithi Yehova lithetha ukuba “Ubangela Kubekho.” Loo nto ithetha ukuba uThixo angasebenzisa yena okanye indalo yakhe ukuba ibe yiyo nantoni na ayifunayo ukuze kwenzeke intando yakhe. NguMdali ongusomandla kuphela onokukwazi ukwenza loo nto.
Ukwazi igama likaThixo kuza kutshintsha indlela obucinga ngayo ngaye. Kuza kuba lula ukusondela kuye. Ubuza kusondela njani kumntu ongamaziyo negama lakhe? Yiloo nto ekuxelela igama lakhe, ufuna usondele kuye.​—Yakobi 4:8.
Ungaqiniseka ukuba uYehova uya kusoloko ezenza izinto azithembisileyo, njengoko igama lakhe lithetha oko. Yiloo nto iBhayibhile isithi: “Abo balaziyo igama lakho baya kukholosa ngawe.” (INdumiso 9:10) Uza kuya umthemba njengoko ufunda ukuba igama lakhe lihambisana kakuhle neempawu zakhe ezifana nothando olungagungqiyo, inceba, uvelwano nobulungisa. (Eksodus 34:5-7) Kuyavuyisa ukwazi ukuba uYehova uya kusoloko ezenza izinto azithembisileyo, esebenzisa ezi mpawu anazo.
Kuyacaca ukuba kulilungelo elikhulu ukwazi igama likaThixo uSomandla. Kungakunceda ufumane iintsikelelo ngoku nakwixesha elizayo. UThixo uthi: “Ndiya kumkhusela ngenxa yokuba elazi igama lam.”​—INdumiso 91:14.
‘Wonk’ ubani obiza egameni likaYehova uya kusindiswa.’—Yoweli 2:32.
Igama likaThixo liguqulelwe ngeelwimi ezahlukeneyo
^ isiqe. 9 Iinguqulelo ezininzi zeBhayibhile ziye zalikhupha igama likaThixo zaza endaweni yalo zafaka elithi “NKOSI” ngoonobumba abakhulu. Ezinye ziye zalifaka kwiivesi ezithile okanye kwimibhalo esemazantsi. INguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ilisebenzisa kakhulu kuzo zonke izibhalo zayo.
Ngaba Igama LikaThixo NguYesu?
Ngaba UYesu NguThixo USomandla?